काठमाडौं, ५ मंसिर । राज्यमन्त्रीसहित सात मन्त्री हटाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा नौ मन्त्री भित्र्याएका छन् । पुनगर्ठित मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । बुधबार राति राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको सूचीअनुसार हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, वसन्तकुमार नेम्वाङ र पार्वत गु..
काठमाडौं, ५ मंसिर । बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाल्ने जघन्य अपराधक..
काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छ..
हेटौँडा, ४ मङ्सिर । नमूना परियोजनाका रुपमा गत आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिएको मुख्यमन..
तुलसीपुर, ४ मङ्सिर । प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुन गइरहेको दाङमा प्रहरीले धमा..
काठमाडौं, ४ मंसिर । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ सुन्दरबस्तीकी १० वर्षीया कृष्मा खतिवडालाई तीन साताअघि सामान्य ज्वरो आयो । आफन्तले कात्तिक १० गते भंगालमा रहेको अक्सिजन नेसनल मेडिकल पुर्‍याए । त्यहाँ डाक्टरका रुपमा कार्यरत अंगतमणि श्रेष्ठ कृष्मालाई ज्वरोले च्यापेको भन्दै भर्ना गरेर स्लाइन चढाउनुपर्ने बताए । आफन्तले कृष्मालाई मेडिकलमै ..
५ देखि १० मन्त्री फेरिंदै, फालिने र भित्रिनेमा को–को ?
काठमाडौं, ४ मंसिर । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चलेको केही दिन भयो । यही कारण सरकारी काम समेत प्रभावित भएपछि मन्त्रीहरूले नै मंगलबार मुख खोलेर सोधे, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, यथार्थ के हो ? ’ ‘हो,’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने, ‘भोलि (बुधबार) कसैले कार्यक्रम नराख्नुहोला । चनाखो भएन, टाढा गयो, यता हेरफेर भयो भन..
कालापानी फिर्ता गर्न सरकारको भूमिका : प्रतिक्रिया मात्रै प्रशस्त, पहल सुस्त
काठमाडौं, ४ मंसिर । अतिक्रमित कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार प्रतिक्रियात्मक बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक भाषणमा सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ, तर औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष आफ्ना सरोकार राखिएका छैनन् । बर..
‘दलितको घर’ भन्ने थाहा पाएपछि मण्डपबाटै भागे पूजारी, नेताले नै लुकाए घटना
कपिलवस्तु, ४ मंसिर । शिवराज नगरपालिका ५ को चन्द्रौटामा पूजा गर्न गएका पूजारीहरु ‘दलितको घर’ भन्ने थाहा पाएपछि पूजा मण्डप नै छाडेर भागेका छन् । चन्द्रौटा बजारमा स्थानीय मिलन विश्वकर्माले निर्माण गरेको नयाँ घरको पूजा, रुद्री, सत्यनारायण पूजा लगायत कर्मका लागि निम्त्याइएका पूजारीहरु भीमप्रसाद आचार्य र गोविन्द भट्टराई उक्त घरका घर म..
आलमको भिडियो सार्वजनिक भएपछि तनावमा प्रहरी
रौतहट, ४ मंसिर । तीनवटा मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएका निलम्वित सांसद मोहम्मद आफ्ताव आलम र प्रहरी अधिकृतबीच भएको सम्वादको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी अधिकृत तनावमा छन् । असोज २६ गते बिहान आलमलाई पक्राउ गरी इद्रिसगेटदेखि गौर ल्याउने क्रममा जीपमा भएको भिडियो सम्वाद आलम पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएपछि सार्वजनिक भएको ..
असफलता ‘ढाकछोप’ गर्न सचिवालय परिवर्तनको हल्ला
काठमाडौं, ३ मंसिर । सरकार सञ्चालनको २० महिना हुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका बेला गत साता बालुवाटारबाट खबर बाहिरियो, ‘सरकारलाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको सिङ्गो टिमलाई राजीनामा गराउँदैछन् । केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् समेत ब्यापक हेरफेर गर्दैछन् ।’ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ महिन..
नेपालमा पहिलोपल्ट आधुनिक फलाम खानी कम्पनी कानुनी रूपमा स्थापना
काठमाडौं, ३ मंसिर । मुलुकमा पहिलो पटक आधुनिक फलाम खानी कम्पनी कानुनी रूपमा स्थापना भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि आधुनिक फलाम खानीले संस्थागत आकार लिएको हो । नवलपुरको होप्से गाउँपालिकामा स्थापना गर्न लागिएकोे फलाम खानी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई कम्पनी सञ्चालनका थप प्रक्रिया अगाडि..
१५ सय दुर्व्यसनीसँग राखिएका आलमले कारागारलाई ‘चिट’ लेख्दै मागे यस्तो ‘गुहार’
काठमाडौं, ३ मंसिर । बम विष्फोटका घाइतेलाई ज्यूँदै जलाएको अभियोगमा नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताव आलम अहिले नख्खु कारागारमा छन् । उनीसँग अन्य १५ सय कैदीबन्दी रहेका छन् । आलमलाई राखिएको ठाउँमा अधिकांश कैदीबन्दी दुर्व्यसनको अभियोगमा पक्राउ गरिएकाहरु छन् । कारागारमा राम्रो सुविधा नभएको र अहसज भएको भन्दै मोहम्मद अफताब..
सल्यान, २ मङ्सिर । सल्यानमा एकजना जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर शिक्षक पेशामा संलग्न हुनुभएको छ । सिद्धकुमाख गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष दिनेश कुमार बुढामगर वडाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर प्राथमिक तहको शिक्षक हुनुभएको हो । विसं २०७४ को स्थानीयतहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित बुढामगरले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको प्राथमिक तह..
काठमाडौँ, २ मङ्सिर । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीका लागि नयाँ तथा पूर्व पदाधिकारी गरी ६१ जना इच्छुकको नाम सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको छ । सिफारिस समितिको आइतबार बसेको बैठकले आज अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेअनुसार आज नाम सार्वजनिक गरिएको समितिका सदस्य शर्मि..
काठमाडौं, २ मंसिर । गुण्डागर्दी तथा आपराधिक गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा गुण्डा नाइकेहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ । प्रहरीको सहयोगमा विभागले उनीहरूमाथि छानबिन थालेको हो । जुवा खालबाट पक्राउ परेका बलराम सापकोटामाथि विभागले थुनामै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनले जुवा खेलेर तथा जुवाडेलाई..
धौलागिरि आधार शिविरमा सूचना केन्द्र
म्याग्दी, २ मङ्सिर । म्याग्दीस्थित संसारको सातौँ (८,१६७) मिटर अग्लो धौलागिरि हिमालको आधार शिविरमा पर्यटक सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि भवन निर्माण भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिकाले पर्यटकको तथ्याङ्क र विवरण राख्न, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । गण्डकी प्र..
सीमाबारे कूटनीतिक वार्ताको तयारी, राजनीतिक तवरमै समाधान खोज्न विज्ञको सुझाव
काठमाडौं, २ मंसिर । अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहमा वार्ता हुने भएको छ । राजनीतिक तहमा पुगेको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्रमा लैजाने तयारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् । लगत्तै त्यसको पहल भएको हो । ‘काम भइरहेको छ । छलफल..
कर्मचारीप्रति कठोर बन्यो सरकार, सेवाग्राहीलाई हानी पुर्‍याए तलव कट्टा
काठमाडौं, २ मंसिर । पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीप्रति सरकार कठोर बन्दै गएको छ । सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई हानी–नोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने गरी सदनमा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकमा प्रारम्भिक छ..
२७ सय नेपाली सैनिकमाथि कारवाही, सलामी नगर्ने पनि परे कारवाहीमा
काठमाडौं, २ मंसिर । सैनिक मुख्यालयले विगत ६ बर्षमा विभिन्न पदमा रहेका २ हजार ७१५ जना सैनिकमाथि विभागीय कारवाही गरेको छ । नेपाली सेनाका विभिन्न दिमा रहेर सैनिक ऐन विपरित काम गरेको भन्दै सैनिक मुख्यालयले २०७१ देखि २०७६ को हालसम्म २ हजार ७१५ जना सैनिकमाथि कारवाही गरेको हो । सेनामा जागिर खाएर भागेकादेखि अनुशासन तथा आचरणविपरित [&hell..
काठमाडौं, २ मंसिर । नेपालको सीमाना भारतले मिचिएकोप्रति नागरिकहरु आन्दोलित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको एक इञ्च पनि जमिन कसैलाई मिच्न नदिइने बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको प्रथम भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो देशभक्त सरकार कसैलाई हाम्रो एक इञ्च पनि जमिन मिच्न दिँदैन, संसारसामु ..
काठमाडौं, १ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण नै गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले नियमित डायलाइसिस वा पुनः प्रत्यारोपण रोज्न उनलाई विकल्प दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रत्यारोपण रोजेका छन् । प्रत्यारोपण स्वदेशमा गर्ने कि विदेशमा भन्ने टुंगो लाग्न मात्र बाँकी छ । १३ कात्तिकमा ग्रान्डी अस्प..
काठमाडौं, १ मंसिर । तापमान घट्ने र चिसो बढ्ने क्रम जारी रहँदा उपनिर्वाचनको राप भने बढेको छ । मंसिर १४ गते शनिबार हुने स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारले राजनीतिक तापमान बढाएको हो । प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ गते उम्मेदवारी दर्ता भई राजनीतिक द..
मन्त्रिपरिषद् ‘पुनर्गठन’ अझै रहस्यमय, हटाइने भनेका मन्त्री ‘ढुक्क’
काठमाडौं, १ मंसिर । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने समाचार अझै पुष्टि हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाउने भनिएका मन्त्रीहरुले नै ‘हामी निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छौं’ भनेपछि ‘पुनर्गठन’ अझ रहस्यमय बनेको छ । एक सातादेखि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने चर्चा शुरु भए पनि त्यो कार्यान्वयनको तहसम्म पुगेको छैन । न..
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणका लागि गाडिएका सीमास्तम्भको अद्यावधिक नापी विभागसँग तयारी अवस्थामा छ । प्रत्येक स्तम्भको अवस्थिति र निर्देशाङ्कलगायतको विस्तृत विवरणसहित ‘डाटाबेस’ तयार पारिएको छ । त्यस्तो अद्यावधिक अब ‘डिजिटल’ रूपमा हुनेछ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नम्बर अनुसार प्रत्येक सीमास्तम्भको..